Khamiis, Dec 3 , 2020-Faah faahin ku saabsan Sarkaal ka tirsanaa CIAda Mareykanka oo lagu dilay Soomaaliya – LaacibOnline
Khamiis, Dec 3 , 2020-Faah faahin ku saabsan Sarkaal ka tirsanaa CIAda Mareykanka oo lagu dilay Soomaaliya
December 3, 2020 Abdirisaaq	0 Comments
Sarkaalkan ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa howlgal wadajir ay u fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka oo ka dhacay deegaanka Gandarshe oo qiyaastii 30km dhinaca Koonfur Galbeed ka xigta Muqdisho.
“Saraakiisheenna oo taageero ka helaya saraakiisha Mareykanka. Waxaan ku duulnay 2: 00 am habeenimo. diyaarado oo askarteena waxay lug ku tageen duurka ka hor inta uusan qarax weyn dhicin oo lagu dilay saaxiibkeen Mareykanka ahaa iyo afar ka mid ah saraakiisha Ciidamada Soomaaliya ayuu yiri ” Sarkaal ka tirsan sirdoonka Soomaaliya.
Weerarkaas lagu qaaday Gandarshe ayeey saraakiishu sheegeen in uu ahaa mid fashilmay” 40 daqiiqo kaddib waxey noqotay in aynu dib u guranno annaga oo aan gaarin ujeedadeennii”
Inta udhaxeysa 650 ilaa 800 oo askari oo Mareykan ah ayaa ka howlgalaya Soomaaliya, sida ku cad tirakoobyadii ugu dambeeyay ee la sameeyay.
← Kenya: Somalia Piles Accusations On ‘Invaders’ Kenya in Latest Diplomatic Spat
Somalia: SNA Says 51 Shabaabs Killed in ‘Botched’ Raid On Somali Military Base →
Isniin, Oct 17, 2020-Dowladda Soomaaliya oo ogolaatay in Qaadka Itoobiya la keeni karo dalka Soomaaliya
Sabti, Dec 5 , 2020-Guddiga Doorashada Heer Federaal oo iska dhax-doortay guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa